प्रदेश सभामा : मुख्यमन्त्री–मन्त्रीदेखि प्रहरी–प्रशासनको चर्को आलोचना – Yug Aahwan Daily
प्रदेश सभामा : मुख्यमन्त्री–मन्त्रीदेखि प्रहरी–प्रशासनको चर्को आलोचना
युग संवाददाता । १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०९:२६ मा प्रकाशित
651 पटक हेरिएको
सुखेत, १२ जेष्ठ ।
सुर्खेतका प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखको चर्को आलोचना भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका हुन । प्रदेश सरकारको एकैपटक हुने काममा दोहोरो खर्च, प्रहरीकै सेटिङमा अण्डामा कालोबजारी लगायतका दर्जनाै‌ खबरदारी समाचारहरु युगआव्हान दैनिक पत्रिका र युगन्यूज डट कम अनलाइनमा प्रकाशित भएपछि प्रदेशसभा संसदमा चर्को आलोचना भएको हो ।
हामीले गरेका खबरदारी
एकैपटक हुने काममा दोहोरो खर्च गर्दै प्रदेश सरकार
कोरोनाबाट मान्छे असुरक्षित मान्छेबाट वन्यजन्तु !
कर्णाली सरकारको लापरवाहीले कोरोना गाउँ पुग्यो, नाकामा परीक्षण भएन
कर्णालीमा क्वारेन्टाइन भएका खाली, नयाँ बनाइँदै
मन्त्रीका मान्छे ओसारिए, कोही नहुनेहरु बाटोमै रोकिए
सुर्खेत प्रहरीको लकडाउन ‘किसानमाथी’
कसको आदेशमा रोकिन्छन एम्बुलेन्स ?
खाना खुवाएर सुताउने, परीक्षण नगरी घर पठाउन
खर्च होला त प्रदेश सरकारको १९ अर्ब बजेट ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कर्णाली सहसंयोजक तथा प्रदेस सभा सदस्य यामलाल कंडेलले बन्दाबन्दीका बेला निश्चित मानिसहरूले कमाउने भाडो बनाएको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कंडेलले सरकारसँग जोडिएका नजिकका मानिसहरूले अहिले उपकारका नाममा कमाउने धन्दा गरेको आरोप लगाएका हुन । एउटा किसान खेतबारीमा जान नपाएर घण्टौ चोकमा बस्नुपर्ने अवस्था भएको तर राहतको नाममा केही व्यवसायीहरूले कमाउ धन्दा चलाएको उनको भनाई थियो । बिपत्तिको बेला सामाजिक विसंगति, बिकृती बढ्दै गएको र यसको नियन्त्रणमा लाग्न प्रदेश सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।
सिमित साधनका बाजजुदका पनि केही कामहरू भएको तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पछिल्ला दिनहरू भयावह हुने उनको भनाई थियो । उनले जथाभावी बजेट बाँडने काम गलत भएको बताए । ‘कति दिन हो कोरोना आतंक हुने, फिक्स छैन,’ उनले भने, ‘ढुकुटी सकिँदै गयो भने हामी कहाँ जाने ? तपाईले बाँडेका पैसा खर्च गर्न नसकिने भनेकै बेलामा पैसा गयो त । दामासाहीको रुपमा हामीलाई पैसा आउँछ । जथाभावी पैसा बाँडदै गएको खण्डमा समस्या हुन्छ । ख्याल गर्नुहोस ।’ नेता कंडेलले सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि काम गर्नुपर्ने बताए । ‘बन्दाबन्दीबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिएका छन् । निर्माण सामाग्री प्रयोग भइरहेका छैनन, मूल्य बढेको बढ्यै छ । यसमा सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक छ । क्वारेन्टाइनमा लट अनुसार राखौं,’ उनले थपे ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले उद्दारका नाममा राज्यको सम्पति सकेर आफुले आफ्नै नीजि सम्पत्ती खर्च गरेर उद्दार गरे जस्तो प्रचार कर्णाली मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गरेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशनमा बोल्दै नेता शाहीले सम्पत्ती राज्यको सकेर श्रीमती र आफ्नो खाता पैसा दिएर उद्दार गरेको जस्तो गरेको बताउँदै शाहीले प्रश्न गरे ।
‘तपाई आफ्नो श्रीमति खाता पैसा, तपाई खाताको पैसा दिएर उद्दार गर्नुभएको भएको हो ?’ उनले भने,‘त्यो तपाई मन्त्री स्वागत गर्न सकिन्छ । तर, राज्यको सम्पती सकेर आफुले गरेको सान लिने ?’ प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणभन्दा हेलिकप्टर मोहमा लागेको नेता शाहीले आरोप लगाए । ‘सरकारले बाढी आयो जस्तो, भूकम्प आयो जस्तो गर्न थाल्यो ।’ उनले भने,‘हेलिकप्टर लिएर ठाउँ ठाउँमा भाषण ग¥र्यो । हुम्लामा अविर जात्रा भयो ।’ उनले भने, ‘जुम्लामा भित्र भाषण गरियो बाहिर आएर किन सेल्फी हानियो । यसरी कोरोना नियन्त्रण हुन्छ ? सरकार’
अहिले सरकारले राम्रोका काम गर्न नसक्दा गलत दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम हुदैँ गएको शाहीको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कसैको कुरा नसुनेको आफुले सबै जानेको जस्तो विज्ञता हासिल गरेको नेता शाहीले बताए । ‘हाम्रो सरकार यस्तो विज्ञता हाँसिल गरेको छ । यसले कसैको कुरा सुन्दैन् ।’ उनले भने, ‘दैनिक मिटिङ्ग भइरहेको छ । स्थानीय तहमा दिएको कोरोना नियन्त्रण रोकथामको रकम कता गयो त्यसको खोजी गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य शोसिला शाहीले सरकारले सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि विकासका कामहरु गर्नु पर्ने बताइन । सरकारले राम्रो काम गरेको खण्डमा समर्थन गर्ने र नराम्रो काम गरेको खण्डमा आफूले विरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।